Paul Pogba oo ka degay Magaalada Dubai & Kooxda Manchester United oo bayaan ka soo saartay xaaladdiisa – Gool FM
Paul Pogba oo ka degay Magaalada Dubai & Kooxda Manchester United oo bayaan ka soo saartay xaaladdiisa
Haaruun November 18, 2021
(Manchester) 18 Nof 2021. Ciyaaryahanka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa la soo warinayaa inuu gaaray Magaalada Dubai ee isugu tagga imaaraadka carabta kaddib markii uu dhaawac ku so gaaray tababarka xulkiisa qaranka Faransiiska.
Pogba waxa uu ku dhaawacmay tababarka xulkiisa qaranka Faransiiska ee ay isugu diyaarinayeen kulamaddii ay uga soo baxeen isreeb-reebka Koobka Adduunka, kaddib markii uu laad xoog leh tuuray.
Sanadkii 2016-kii ayay Manchester United kula soo wareegay 89 milyan oo gini, waxaana la filayaa inuu 28-sano jirkaan garoommada ka maqnaan doono muddo labo bilood ah oo uu inta badan ku qaadan doono Magaalada Dubai, maadaama uu ka faa’iideysanayo cimillada diirran ee halkaasi.
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku xaqiijisay inay Pogba u fasaxday in qeybta hore ee tababarkiisa soo kabashada uu ku soo qaato Imaaraadka Carabta, isla markaana uu markaa kaddib dib ugu soo laabto garoonka Old Trafford qeybta dambe ee soo kabashadiisa.
“Laacibka khadka dhexe ee Manchester United, Paul Poga waxa uu u safray Dubai oo uu ku soo qaadan doono cimillada diirran ee wajiga xiga ee soo kabashadiisa.” ayuu u dhignaa bayaanka ka soo baxay kooxda reer England ee Man Utd.
“28-sano jirkan ayaa iska xaadiriyey shaqada xulka qaranka Faransiiska bilowga toddobaadkii hore, balse nasiib-darro waxa uu ku dhaawacmay tababarka, Pogba haatan waxa uu ka shaqaynayaa sidii uu u soo kaban lahaa.”
Safarka Pogba uu ku aaday Magaalada Dubai waxaa ku wehliya tababare dhanka jir-dhiska ah oo ay kooxda Man United ku dartay, kaasoo kalas shaqayn doona sidii uu uga soo kaban lahaa dhaawacaas.
Recovery mode ✅ pic.twitter.com/Nh3McwS7hY
Kooxda Chelsea oo doonaysa saxiixa xiddig ka tirsan Leicester City oo dhaawac awgiis aan ciyaarin xilli ciyaareedkan
Barcelona oo doonaysa inay iska iibiso Frenkie de Jong & Koox ka dheesha horyaalka Premier League oo laga iibinayo